American Muscle ကားဆိုတာ ဘာလဲ..?
တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် အမေရိကားမှာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ ကားတွေကို ဆိုလိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါးနှစ်ပေါက် အပါအဝင် စွမ်းဆောင်မှုကောင်းလွန်းတဲ့ Engine တွေ တပ်ဆင်ထားတယ်။ Family type လိုမျိုးလည်းစီးနှင်းနိုင်တယ်။ သင့်တင့် တဲ့ ဈေးနှုန်း လည်းရှိရပါမယ်။ ဒီလိုအချက်တွေပါဝင်ပြီဆိုရင် muscle ကားအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ရပါပြီ။
ပေါ့ပါးတဲ့ ကား Body နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားတဲ့ Engineတို့ ကို ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်လိုက် တဲ့အခါ Super Car ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ Super Car ဆိုသည်မှာ အမေရိကတိုက်တွင် Muscle ကား အသုံးအနှုန်း မပေါ်ခင် သုံးစွဲခဲ့ကြသည့် အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို နာမည်ကြီး Muscle ကားအမျိုးအစားတွေကို အမေရိကတိုက် မြို့ကြီးအချို့ မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် တွေ့လေ့တွေ့ထရှိပါတယ်။ ဒါတွေထက် Muscle ကားတွေက Street Gang Race လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ အမေရိကန် Gangster ကားပြိုင်ပွဲတွေ ထဲမှာ အလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ အလွယ်တကူပြောရမယ်ဆိုရင် Fast and Furious ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း ကို ဥပမာအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လိုကာတွေက Muscle ကားအမျိုးအစားအဖြစ် ပါဝင်နေမှာလဲ..?
၁၉၇ဝ လောက်မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Ford Mustang အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ V8 engine ကို အသုံးပြုထားတဲ့အပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံ Street Racing လောကမှာ နာမည် ကြီးခဲ့တဲ့ ကားလေးပါ..
နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းလွန်းလှတဲ့ ၁၉၇ဝ ခုနှစ် ကဒီဇိုင်း...
အသက်အရွယ်မရွေး ၊ အမျိုးသားအမျိုးသမီးမရွေး....
၁၉၇၁ ခုနှစ် မှာ Plymouth မှ ထွက်ရှိထားတဲ့ Hemi Cuda ဖြစ်ပါတယ်။ Plymouth ဆိုတာ တစ်ချိန်က အမေရိကန် နာမည်ကြီးကားကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Chrysler Corporation လက်အောက်ကနေ ခွဲထွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Brand အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်က အကြမ်းခံနိုင်ပြီး လူလတ်ပိုင်းတွေ အထူးနှစ်ခြိုက်ခဲ့တဲ့ Model လေးပါ..
အတွင်းခန်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နဲ့ Sport Type ဖြစ်နေတာကပဲ လူကြိုများခဲ့တဲ့ အချက်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါ့အပြင် V8 engine ကို ၄ချက်ထိုး Manual gear တပ်ဆင်ထားပါသေးတယ်...
Fast and Furious ဇာတ်လမ်းထဲမှ ကမ္ဘာကျော် မင်းသားကြီး Vindiesel ကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ ၁၉၇ဝ Dodge Charger အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်..
Classic ကျ တဲ့ အတွင်းခန်း.....
အရောင်မရွေး လှပနေမယ့် ဒီဇိုင်း...
နာမည်ကြီး Chevrolet ကုမ္ပဏီကနေ ပြိုင်ကားလောက အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၇ဝCamaro SS အမျိုးစားလေးပါ..
Classic Sport လို့ပြောလို့ရတဲ့ အတွင်းခန်း...
အရင်ခေတ် အချိန်အခါအတွက်ကတော့ သရေကျစရာ စက်ခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Engine အနေနဲ့ကတော့ V8 နဲ့ V6 နှစ်မျိုးထွက်ရှိ ထားခဲ့ပြီး ၄ချက်ထိုး manual နဲ့ ၃ချက်ထိုး auto gear တို့ပါရှိထားတာပါ....
1969ခုနှစ်မှာ American Muscle ကားလောကထဲ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ အမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ Pontiac ဆိုတာ အမေရိကန် အခြေစိုက် ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ General Motors မှ Chevrolet Camaroကို ဈေးကွက် ထဲ စတင်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ Pontiac Firebird က အမေရိကန် Muscle ကားချစ်သူတွေနဲ့ရင်းနှီးမှုရရှိနေပါပြီ။
ဆွဲဆောင်မှုသိပ်မရှိပင်မယ့် အတွင်းခန်းကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့စီးနှင်းနိုင်မယ့် ဒီဇိုင်း...
အင်ဂျင်အမျိုးအစားကတော့ V8 နဲ့ I6 အမျိုးအစားတွေကို အသုံးပြုထားပြီး4speed manual transmission ကို နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
နောက်ဆုံးတစ်စီးကတော့ အရင်ခေတ်အချိန်အခါအရ ခေတ်ရှေ့ပြေးတယ်လို့ပြော နိုင်လောက်တဲ့ 1973 Camaro Pro အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
V8 engine အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပြီး ၄ချက်ထိုး manual နဲ့၃ချက်ထိုး auto ကို ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်..
ဒီကားတွေအကုန်လုံး United States မှာ ထုတ်လုပ်သည့်အချိန်မှ ယနေ့ချိန်ထိ နာမည်ကျော်ကြား မှုရှိထားတဲ့ ကားအမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို Asia ဒေသအတွက်ကရော ဘယ် ကားအမျိုးအစားတွေက Muscle ကားအဖြစ်တည်ရှိနေမှာပါလဲ...?